Nosafidiana manokana i Toamasina noho izy voasokajy ao anatin'ireo faritra betsaka trangana coronavirus. Re fa ho avy any an-toerana ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina. Raha tsy misy ny fiovana dia tahaka izao ny programa ao Toamasina anio: amin’ny 10ora maraina ny fitiliana eo anoloan’ny Lapan’ny tanàna, amin’ny 11ora eo amin’ny Paositra ny fizarana Tosika Fameno, amin’ny 12ora ny fizarana rakibolana ao amin’ny EPP Maurice Guyot Bazary be; ny tolakandro no fanatanterahana ny fanampiana ny hopitaly manaram-penitra ao Morafeno. Tato anatin’ny andro vitsy fotsiny, dia nisy ireo olona 8 voamarina fa voa tany Toamasina. Araka ny tatitra omaly dia ny 6 tamin’ireo 7 vaovao dia tany amin’ny Faritra Antsinanana avokoa. Miisa 20 ankehitriny ny olona mararin'ny Coronavirus any Toamasina.